Go’aan Maxkamadeed La xiriira Kufsi oo la Riday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Go’aan Maxkamadeed La xiriira Kufsi oo la Riday
La cusbooneeyay onsdag 11 april 2012 kl 15.00
La daabacay onsdag 11 april 2012 kl 13.41
Toddoba ka mid ah raggii lagu soo oogay kufsiga culus ee ka dhacay degmada Eksjö ayaa lagu riday xukun. Xukunka ugu sarreeya ee ah lix sannadood iyo bar xarig ah ayaa lagu riday laba ka mid ah raggaasi iyagoona lagu eedeeyey iney geeysteen fal-dambiyeed kufsi culus iyo gacan ka geeysasho kufsi culus.
Raggaa ayaa ayaa dhammaantood lagu eedeeyey iney gabar ku kufsadeen xero qaxooti ee ku taala degmada Mariannelund ee gobolka Småland.
Falkan kufsiga ee gabadha loo geeystey ayaa ka dhacay xero qaxooti horraantii bishii diseembar ee sannadkii ina dhaafay, iyadoona wixii falkaasi ka dambeeyey toddoba ka mid ah raggaasi gacanta lagu hayay, halka ninkii sideedaana ooda laga qaaday toddobaadkii tagay.
Xeerka u degsan dalka ayaa qaba in ciqaabta kufsiga culusi tahay muddo u dhaxeeysa afar illaa iyo toban sannadood. Qaar ka mid ah raggaana waxey qarka u saaran yihiin in dalka laga tarxiilo haddii ey xukun ku riddo maxkamadda degmada Eksjö.